जसपाको कारण शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र – kalikadainik.com
जसपाको कारण शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र
शुक्रबार, बैशाख ०३, २०७८ | १२:२९:५१ |
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयार भएका विपक्षी दलहरू अंक गणित पुर्‍याउन नसकेर अन्योल बनेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसदहरू मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एकमत हुन नसक्दा अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका कुल ८७ मध्ये नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका ६ र राजमोका १ जना सांसद रहेका छन् । माओवादीका २० मध्ये एमालेमा प्रवेश गरेका २ सांसदलाई कारवाही गरेपछि सो पार्टीका १८ सांसद बाँकी छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद हुन् ।
के भन्छ जसपा ?
जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताका विषयमा सबै दलबीच छलफल भएपनि कुनै निचोडमा नपुगेको नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले आफ्नै दलभित्र पनि सबै सांसदको एउटै धारणा नभएकोले अंकगणित पूरा नभएको बताए । पाण्डेले भने, ‘ अश्विासको प्रस्ताव फेल हुनेगरी लैजाने कुरा भएन, हाम्रो दलका सबै माननीयहरू राजी हुनुभएको छैन, खासगरी एकजना तयार हुनुभएको छैन, तयारी भएपनि अंक गणित नपुगेर रोकिएको हो, केन्द्रको निर्णय नआउँदा पनि ढिला भएको हो । आज पनि हामी छलफल गर्छौँ ।’
जसपाकै सांसद कल्पना पाण्डेले संसदीय दलले केन्द्रीय पार्टीलाई हामीले कुन दललाई समर्थन गर्ने ? भनेर लिखित पठाएपनि औपचारिकरूपमा केही नआएकाले अहिले नै निर्णय दिन नसेकेको बताइन् ।
‘अहिले परिस्थिति धेरै अगाडि गएको देखिँदैन, अन्य दलका साथीहरू पनि छलफलमा जुटेको सुनेको छु, सरकारले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ। आजलाई यो भन्दा धेरै नबोलौं’, उनले भने ।